AMISOM oo xabsiga u taxaabtay 2 askari oo ka mid ahaa ciidamadii xasuuqa ka geysatay Marka. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
2nd August 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM oo maanta gaaray magaalada Marka xarunta gobolka Sh/hoose ayaa waxa ay kulamo la qaateen oday dhaqameedka magalaada Marka.
Kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM ee fadhigoodu yahay deegaanka Ceel-jaale ee degmada Marka waxana ay u sheegeen odayaashii ay la kulmeen in AMISOM aysan raali ka ahayn in dad rayid ah la xasuuqo.
Qoysas faro badan ayaa ka barakacay xaafado ka tirsan magaalada Marka iyagoo ugaga cararay sababo ammaan awgeed. Hore ayaa qoysas badan oo degenaa magaalada Marka waxa ay ugaga barakaceen dagaalo sokeeye oo dhex maray